Debian Day ၂၀၂၁: Debian 2021 Bullseye ကို Debian Day တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သလား။ အ | Linux မှ
Debian Day ၂၀၂၁: Debian 2021 Bullseye ကို Debian Day တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သလား။
Linux Post Install လုပ်ပါ | 15/08/2021 00:11 | အဆင့်မြှင့်တင် 15/08/2021 00:34 | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
မနေ့က, 14 သြဂုတ်လ 2021၎င်းသည်များစွာသောချစ်သူများအတွက်ဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အလွန်ထူးခြား။ စောင့်မျှော်ခဲ့သည့်နေ့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လုပ်သူကို the လို့ခေါ်တယ် Debian နေ့ သို့မဟုတ် "Debian GNU / Linux နေ့".
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအထဲမှာ ၂၀၂၁ Debian နေ့ လူများစွာသည်ပထမတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကြေငြာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသည် "Debian 11 Bullseye"မရ။ ဟုတ်တယ်၊ မနေ့ကတစ်နေ့တာကုန်ခါနီးမှာမျှော်လင့်ထားတဲ့ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးသူ့ရဲ့ ISOs တွေကိုပုံမှန်အပိုင်းတွေမှာရနိုင်ပါတယ်။ Debian စီမံကိန်းမရ။ ဒါဆို: ငါတို့မှာရှိပြီးသား "Debian 11 Bullseye" ကြိုးစား၊ သုံး၍ ပျော်မွေ့ပါ။
Debian 11 Bullseye - Debian အသစ်ထည့်သွင်းခြင်းကိုကြည့်ခြင်း
ဒါ့အပြင်ငါတို့နဲ့ဆက်စပ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချို့ကိုဝေမျှပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ် ပွဲနေ့ y ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိ.
သို့သော်ယင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများသို့မရောက်မီ ၂၀၂၁ Debian နေ့ တွင်စတင်ခဲ့သည် 14 / 08 / 2021ထုံးစံအတိုင်းငါတို့aရဲ့ link ကိုချက်ချင်းထားခဲ့လိမ့်မယ် ယခင်ဆက်စပ် post နှင့် "Debian 11 Bullseye" ဖြစ်နိုင်ချေကိုငါတို့ပြောပြီးပြီ နောက်ဆုံးထုတ်ဝေရက်မရ။ ဒါကြောင့်လိုအပ်ရင်သူတို့ကဒီစာအုပ်ရဲ့အဆုံးမှာသူတို့အလွယ်တကူဖတ်နိုင်ပါတယ်။
"အတိုင်း ဝီကီအပေါ်တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် de la Debian အဖွဲ့အစည်းဤနှစ်သည်နှစ်ဖြစ်သည် "Debian 11 Bullseye"ဤအရာသည်ဤဗားရှင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်အဓိကမှတ်တိုင်များဖြစ်သည်။
12-01-2021: အကူးအပြောင်းနှင့်ကန ဦး ခဲ။
1 Debian Day 2021: Debian GNU / Linux Day 2021 အတွက်အသစ်ကဘာလဲ
1.1 ၂၀၂၁ ခုနှစ် Debian Day တွင် Debian 11 Bullseye ကိုဖြန့်ချိပြီးပြီလား။
1.2 ၂၀၂၁ ခုနှစ် Debian Day ကိုကျင်းပခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
1.3 Debian 11 Bullseye ထုတ်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ
1.4 Debian GNU / Linux တွင်တရားဝင်သတင်း၊ သတင်းနှင့်တရားဝင်အပ်ဒိတ်များ
Debian Day 2021: Debian GNU / Linux Day 2021 အတွက်အသစ်ကဘာလဲ
၂၀၂၁ ခုနှစ် Debian Day တွင် Debian 11 Bullseye ကိုဖြန့်ချိပြီးပြီလား။
ဟုတ်တယ်၊ မနေ့က ၀၈/၁၄ ကသူမပြန်လွတ်လာတဲ့နေ့ရဲ့အဆုံးနီးပါးမရ။ ယမန်နေ့ကရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Debian Project မှအသေးစားသတင်း ၎င်းကို၎င်းနှင့်အသိမှတ်ပြုနိုင်သည် ISO များရရှိနိုင်ပါသည် လာမယ့်၌ link ကို.
၂၀၂၁ ခုနှစ် Debian Day ကိုကျင်းပခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
El Debian နေ့ အတွက်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် 14 / 08 / 2021ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောက်ပါတို့ကိုသင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီး၌အနီးအနားရက်စွဲများတွင်ကျင်းပလေ့ရှိသည် link ကို.
El Debian နေ့ တကယ်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ပဲ Debian စီမံကိန်းမရ။ ရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် 16 / 08 / 1993အောက်ပါ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း link ကို.
တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအသစ်တိုင်း "Debian 11 Bullseye" နောက်ထပ်အမှားများမတွေ့ပါကသာဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ အောက်ပါတို့၌မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းမနေ့ကညနေကိုရောက်ခဲ့သည် link ကို.
Debian 11 Bullseye ထုတ်ဝေမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ
23:40 – 14/08/2021Debian 11 Bullseye ကိုဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။ သတင်းစူးစမ်း
23:31 – 14/08/2021Debian 11 Bullseye ကိစ္စတွင်လုံခြုံရေးကို bullseye-security ဟုအမည်ပြောင်းလိုက်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အဆင့်မြှင့်တင်သည့်အခါ၎င်းတို့၏ APT အရင်းအမြစ်စာရင်းဖိုင်များနှင့်ဆက်တင်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ညှိရန်လိုသည်။ သတင်းစူးစမ်း
23:14 – 14/08/2021: သင်၏စနစ်သည် Debian9(Stretch) သို့မဟုတ်အစောပိုင်းဖြစ်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ Debian 10 ထုတ်ဝေမှုမှတ်စုများ Debian 10 (Buster) ကိုအရင် upgrade လုပ်ပြီး Debian 11 Bullseye သို့ upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းစူးစမ်း
23:08 – 14/08/2021: Debian 11 Bullseye သည်သင့်အနီးရှိသိုလှောင်ရုံများဆီသို့အဆက်မပြတ်ရောက်ရှိနေသည်။ သင်နောက်ထပ်မစောင့်နိုင်တော့ပါက CD ပုံများကိုအောက်ပါအတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည် link ကို. သတင်းစူးစမ်း
Debian GNU / Linux တွင်တရားဝင်သတင်း၊ သတင်းနှင့်တရားဝင်အပ်ဒိတ်များ
ဒီထက်ပိုပြီးခေတ်မီဖို့ Debian စီမံကိန်း အောက်ပါ link များကိုမကြာခဏစူးစမ်းနိုင်သည်။
DEBIAN Project ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်
Debian 11 ဖြန့်ချိရေးမှတ်စုများ (Bullseye)၊ 64-bit PC
အသေးစားသတင်း ၀ န်ဆောင်မှု: Micronews
အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒါက ၂၀၂၁ Debian နေ့ နှစ်ရှည်လများစောင့်မျှော်ခဲ့သည့်ဗားရှင်းအသစ် Debian စီမံကိန်းကိုခေါ် "Debian 11 Bullseye" ၎င်းကို၎င်းအားစမ်းသပ်ရန်၊ သုံးရန်နှင့်၎င်းကိုနှစ်သက်ကြောင်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်ပေးရန်၎င်း၏အသည်းအသန်အသုံးပြုသူများနှင့်စိတ်ဝင်စားသောပါတီများအတွက်သာကျန်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Debian Day ၂၀၂၁: Debian 2021 Bullseye ကို Debian Day တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သလား။
KDEApps2: KDE Community အက်ပ်များကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေသည်
APT တိုက်ခိုက်မှု - အဆင့်မြင့်တည်တံ့သောခြိမ်းခြောက်မှုများသည် Linux ကိုထိခိုက်နိုင်သလား။